Iindaba zesiXhosa, 12:00pm, 13 Eyomdumba 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 12:00pm, 13 Eyomdumba 2019
Written by Ashia Nkontsa on 13/02/2019
Abafundisi baziva bengakhuselekanga eCPUT
Uthi abaziva bekhuselekile bengamabhinqa omnye wabafundisi kwidyunivethi yezobuchwepheshe iCPUT eBellville, kulandela uqhankqalazo lwabafundikula khampasi kubusuku bayizolo. Abafundi kula dyunivesithi bazakhele amatyotyombe izolo bebanga ngelithi ladyunivesithi ayibaniki indawo zokuhlala. Ingxelo zidiza ukuba kukho indawo yokuhlala abafundi eyavalwayo kuthenjiswa ngokuba izakulungiswa kunyaka opelileyo kodwa kube ngoku ayikavulwa.Ukanti koluqhankqalazo kutshiswe oduladula bokuthutha abafundi ababini kubusuku bayizolo.
iOfisi kasodolophu inikezele ngezixhobo zemfundo eKuyasa
Iyokunikela ngezixhobo zokufunda kumabanga abasaqalayo kwisikolo samabanga aphantsi I Kuyasa primary nase Nolungile eSitec iofisi kasodolophu wesixeko sekapa namhlanje. Othethel le ofisi uLyndon Khan uthi isikolo ngasinye sizakufumana izixhobo ezixabisa amashumi amabini amawaka erandi ezizakuncedisa ukuphucula izinga lemfundo lwabafundi abasaqalayo ukufunda.
Ipalamente isikelwe ixesha malunga nesigqibo ngophando lwamaPolisa
Isikelwe umda wokuphela kwale nyanga ikomiti yepalamente kwisipolisa khon’ukuze ithabathe isigqibo ngakwintloko yegunyabantu lophando lamapolisa i-Ipid umnumzana Robert McBride kungenjalo icacisele inkundla ephakamileyo ukuba kungani na ifuna ilixa elongezelelweyo lokuthabatha isigqibo. Esi sigunyaziso sithatyathwe kwisivumelwano sayizolo phakathi kwamagqwetha ekomiti uMcbride kwakunye nomphathiswa wenkonzo yesipolisa unjengele Bheki Cele. UMacBride urhuqele umphathiswa enkundleni emtyhola ngokuthabatha isigqibo sokungavuseleli isivumelwano sakhe sengqesho esifikelela esiphelweni emsileni wale nyanga. Nangonanje bekulindelee uviwo lweengxoxo, inkundla ixelelwe ukuba ababandakanyekayo bafikelele kwisivumelwano sangaphandle kwenkundla esithi inyewe yesivumelwano sikaMcBride ijongene nekomiti yepalamente.
Lubekwe iliso udushe lwasezikolweni
Usekela mphathiswa wezemfundo umnumzana Enver Surty uthi iibhodi zolawulo ezikolweni kufuneka zibe neekomiti zokhuselo kananjalo kubekho ikhonco eliluqilima phakathi kwamapolisa nezikolo. USurty uthi isebe lixhalabile malunga nodushe lwasezikolweni,ukuhlaselwa kootitshala,ukukrazuka kwezimilo zabanye babafundi kwakunye nokufunyanwa kweziyobisi notywala ezikolweni. Kusenjalo,zingaphezu kweshumi elinesihlanu lamawaka izikolo eziphantsi kweso lamapolisa njengenxalenye lephulo likaAdopt-A-School. Njengenxalenye yeli phulo amapolisa akha unxulumano nezikolo aze athethe nabafundi malunga neengxaki zokuhlala ezifana neziyobisi nokwehlisa izixholo-xholo ekuhlaleni. Ikhwelo likaSurty liza emva kokungaboni ngasonye phakathi komfundi notitshala kwisikolo samantombazana i-Souci Girls’High eKapa kwakunye nezityholo zokudlwengulwa kwamakhwenkwana amane kwisikolo samabanga aphantsi eCape Winelands.
Kuzakubanjwa ulonyulo looCeba kwaWard 4 nakwa ward 54
Ikomishoni ezimeleyo yolonyulo kwiphondo leNtshona Koloni ithi namhlanje kuzakubanjwa ulonyulo lovalo zikhewu kwiiwadi ezimbini. Elokuqala ulonyulo luzakubanjwa eKnysna kwa-Ward 4 nalapho umqulu wabavoti uqulathe amagama abantu ababhalisileyo abangaphezu kwamawaka amane anamakhulu amane. Olwesibini ulonyulo lovalo-zikhewu luzakubanjelwa kwa-ward54 kumasipala wesixeko seKapa eCamps Bay nalapho abavoti ababhalisileyo bengaphezu kwamawaka alishumi elinesithandathu anamkhulu amathathu. Igosa eliyintloko yezolonyulo kweli phondo uMfundisi uCourtney Sampson uthi kwa-Ward 4 sivele isikhewu emva kokuguzulwa kukaceba esihlalweni lo gama eCamps Bay ebeke phantsi iintambo.